သတင်း - အဖြူရောင်ရောစပ်ထားသောအလူမီနာများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
ပေါင်းစပ်ထားသော Alumina Magnesia Spinel
Monocrystalline ပေါင်းစပ်ထားသော Alumina
ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံ & ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
abrasive စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသုံးအများဆုံး corundum abrasive အမျိုးအစားသည်အဖြူရောင်ဖြစ်သည် ပေါင်းစပ်ထားသော aluminaမရ။ ၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစားသုံးရန်ဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုသည်မကြာသေးမီကစိုစွတ်ခဲ့သည်။ အဖြူရောင်ရေစိုခံတိုင်းတာမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုကိုမည်သို့ယူကြမည်နည်းပေါင်းစပ်ထားသော alumina? အောက်ပါတို့မှာတိကျသောအကျဉ်းချုပ်ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်သည်:
1. အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်: White fused alumina ကိုအရောင်တင်ခြင်းနှင့်ကြိတ်ခြင်း၊ သံမဏိသံမဏိ၊ မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိနှင့်အခြားသတ္တုများအတွက်သုံးနိုင်သည်; sandblasting, ကြိတ်ဘီးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်းသုံးနိုင်သည်; ၎င်းကိုတိကျစွာပုံသွန်းခြင်း၊ သံမဏိသားတု၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ၉၅ လျှပ်စစ်ကြွေ၊ နေ့စဉ်ကြွေအလှဆင်ကြွေထည်များနှင့်ကြွေထည်ပစ္စည်းများကိုလည်းကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။; စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့နည်းပညာမြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ အဖြူရောင်ပေါင်းစပ်ထားသော alumina ၏မာကျောမှုသည် corundum အညိုရောင်ထက်အနည်းငယ်ပိုမြင့်သည်။ ၎င်းတွင်အနည်းငယ်နိမ့်သောမာကျောမှု၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာထက်မြက်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့သောကြိတ်နိုင်စွမ်း၊ အပူထုတ်လုပ်မှုနည်းခြင်း၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ အက်ဆစ်နှင့်အယ်ကာလီချေးများခုခံနိုင်မှု၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံနိုင်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောအပူတည်ငြိမ်မှုတို့ပါ ၀ င်သည်။
2. ရေစိုခံ curing: White ပေါင်းစပ်ထားသော alumina abrasives, အဖြူအပါအဝင် ပေါင်းစပ်ထားသော alumina အမှုန့်၊ အဖြူရောင် ပေါင်းစပ်ထားသော alumina သဲစသည်တို့ကိုအားလုံးက high-temperature smelting ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအခြား abrasive products များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သာလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုနေစဉ်၊ နေ့စဉ်သိုလှောင်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုကာလအတွင်းရေလုံနှင့်အစိုဓာတ်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကပိုကောင်းအောင်သုံးနိုင်တယ်။
၃။ ၎င်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ အကာအကွယ်ကိုယ်စားလှယ်သည်အဖြူရောင်ကိုအပြည့်အ ၀ ကာကွယ်ပေးသည် ပေါင်းစပ်ထားသော alumina အစိုဓာတ်၊ အစွန်းအထင်းများ၊ ဆီအစွန်းအထင်းများစသည်နှင့်ကွဲပြားသောဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်ကျောက်ပွင့်သို့မဟုတ်သံချေးအစွန်းအထင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးသည်။ White corundum သည်အတွေ့ရများဆုံးဖြစ်ပြီးရှောင်ရန်မှာရေအစွန်းအထင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အခြေအနေများအရရေအစွန်းအထင်းများကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း၌ထုတ်လွှတ်နိုင်သော်လည်းရေရှည်စိုစွတ်သောနှင့်မိုးရာသီအခြေအနေများတွင်ရေအစွန်းအထင်းများကိုမချေဖျက်နိုင်ပေ။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသိုလှောင်ထားသည့်အခါစွန်းထင်းသောအရာများသည်အဖြူရောင် corundum အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပြီးကျောက်တုံး၏ stomata ၏အကျိတ်ကိုသာဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ (သို့) စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အီးမေးလ်ကိုချန်ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်ပါမည်။
အမှတ် ၁ Wanquanhe လမ်း၊ Shangjie ခရိုင်၊ Zhengzhou မြို့၊ Henan ပြည်နယ်၊ တရုတ်